Ama-Proteas Women alindele ithuba lokubhekana ne-England futhi
Ukapteni u-Dané van Niekerk ugcizelele ngenhloso yeqembu lakhe ngaphambi kohambo lwe-Momentum Proteas beya e-England ehlangene nomqeqeshi, u-Hilton Moreeng bekhuluma nezintatheli eGoli ngoLwesithathu.
Sibonga umdlalo omuhle kwe-ICC Women’s World Cup onyakeni odlule, lapho iqembu lafika kuma-semi-final eminyakeni engu-17 ngaphambi kokuhlulwa i-England, u-Van Niekerk uyagcizelela ukuthi iqembu lakhe lizoya kuhambo nethemba elisha kanye nesifiso sokunqoba.
“Okokuqala, sibakweleta okukhulu emuva kwale-World Cup, ukuze siyekhona nokuphindiselela ekhanda,” esho ngokuhlekisa.
“Sabona ezigabeni zezixuku kwi-World Cup (ukuthi isikhala sivaleke kangakanani), lapho ebahlanganisa khona u-370 kodwa ukuthi sabuya futhi sathola ama-runs adlulile ku-300, lokho kwakhombisa ithemba esinalo kubona njengeqembu. Sifika kwi-semi-final, kwisimo ekade sikusona futhi lapho ekade sikhona, ukusondela ngaleyandlela, kuyakhombisa ukuthi sinani eqenjini,” esho enezezela.
Emuva kwe-tour enempumelelo ne-Bangladesh, lapho i-South Africa yanqoba ngo-5-0 no-3-0 kuma-One-Day International nama-T20 International series ngokulandelana, ama-Proteas ekwi-form enhle ngaphambi kwemidlalo emithathu yama-ODI ne-triangular series ene-New Zealand kwisimo sase-England.
Umqeqeshi u-Moreeng ukholwa ukuthi leli ithuba elihle lokuthi iqqembu lakhe liziveze bedlala nabaphethe isicoco somhlaba.
“Ngicabanga, uma ubheka amakhono kanye namathalente esinawo eqenjini,ngingathi abadlali, abaphethe kanye neqembu kumele babe kulaba abathathu abaphezulu. Kumele engabe senza kangcono kunalokhu esikwenza manje,” kusho u-Moreeng.
“Kusukela kwi-World Cup, ngicabanga ukuthi iningi labadlali liyabona ukuthi akukona ukuyakhona kuphela kanye nokubona ukuthi singenzani kodwa nokuthi singafundani. Kumele sithuthukise i-ranking yethu futhi singakwenza lokho ngokubhekana ne-England, i-New Zealand ne-Australia, abahamba phambili kwikhilikithi emhlabeni.”
“Ngakho, okwethu njengegama, sibheke endaweni enhle kodwa kumele sinqobe lezonhlobo zama-series. Alikho ithuba elikhulu kunaleli esilibhekile e-England.”
“Ngicabanga ukuthi sonke siyakhumbula ukuthi kwenzakalani kumdlalo wokugcina lamaqembu ebhekana, kulele kithina ukuthi siphindela khona futhi siqiniseke ukuthi siyi-changeroom ejabulile,” esho evala.
i-CSA imemezela iqembu lama-Proteas Women elizoya e-England Ama-Proteas women athola i-T20 series whitewash u-Luus no-Van Niekerk bahlela ukunqoba i-series kwama-Proteas women Ama-Proteas women aphetha ngokuthola u-5-0 Ama-Proteas Women anqoba emine kwemine Ama-Proteas azimisele ukunqoba i-ODI series e-Kimberley Ama-Proteas women anqobe umdlalo wokuqala bedlala ne-Bangladesh u-Salieg Nackerdien ubekwe njengomqeqeshi obambile wama-Momentum Proteas Ama-Proteas women akulungele ukuhlangana ne-Bangladesh i-Cricket South Africa imemezele amaqembu ama-Proteas women azodlala ne-Bangladesh CSA announces Momentum Proteas contracted squad list